Faah faahin, Weerarkii saaka ee Degmada Shibis Muqdisho – SBC
Faah faahin, Weerarkii saaka ee Degmada Shibis Muqdisho
Posted by Webmaster on June 21, 2015 Comments
Weerarkan ayaa saaka ka dhacay Dugsiga tababarka ciidamada Nabadsugida ee ku yaala degmada Shibis, waxaana weerarkaasi uu ahaa mid markiisii hore ku bilowday qarax iyadoo ka dib labada dhinac waa ciidamada DFS iyo kuwii weerarka soo qaadaye ay is weydaarsadeen rasaas mudo soconeysay.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Amniga oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid fashilmay islamarkaana ciidanka dowladda ee ilaalada ka hayay xarunta ay fashiliyeen, waxaanu intaas ku daray in raga weerarka soo qaaday ay tiro ahaan dhamaayeen 3 ruux laba ka mid ahi ay ciidanku toogteen halka midka kalena uu isku qarxiyay gaari yar oo nooca raaxada ah.
Dhinaca kale wasaaradda ayaa saxaafada u ogolaatay in ay sawirtaan labada nin ee uu sheegay afhayeenku in ay ciidamada toogteen, waxana ay ragaasi ahaayen kuwo ku labisnaa dresska ciidanka militeriga dalka, iyadoo sidoo kale ay muuqanayee burburka uu weerarkaasi dhaliyay.
Waxa uu noqonayaa weerarkan kii ugu horeeyay ee dhaca inta lagu guda jiro bishan ramadan, sidoo kale waxa uu weerarkan imanayaa xili xarakada alshabaab ay sheegeen in ay kordhin doonaan weerarada ay ku qaadaan ciidanka dowladda.
DHAGEYSO warbixin arrintan ku saabsan oo uu diyariyay wariye Xasan Maxamed Samatar Cowke.